အောင်မြင်မူတွေ ရခဲ့ပေမယ့်လဲ ရွှေညီအကို အငြိမ့်ဖွဲ့ကြီး ပြိုကွဲခဲ့ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းကို ပြောပြလာတဲ့ လူရွှင်တော် ဝိုင်းချစ် – Myanmar Update News
အောင်မြင်မူတွေ ရခဲ့ပေမယ့်လဲ ရွှေညီအကို အငြိမ့်ဖွဲ့ကြီး ပြိုကွဲခဲ့ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းကို ပြောပြလာတဲ့ လူရွှင်တော် ဝိုင်းချစ်
လူရွှင်တော် ငြိမ်းချမ်း၊ ဝိုင်းချစ်၊ ထက်ထက်၊ ရှဲဒိုးနဲ့ ကောင်းကျော်တို့ရဲ့ ရွှေညီအကို အငြိမ့်အဖွဲ့ကြီးကတော့ နိုင်ငံအနှံ့မှာ အောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့် ၇ နှစ်တာကာလအပြီးမှာ ပြိုကွဲခဲ့ရပါတယ်။ လူရွှင်တော် လောကမှာ အထူးနာမည် ကြီးခဲ့သလို ယခုထက်ထိ
ပရိသတ်ရဲ့ ချစ်ခြင်းကို ရရှိနေဆဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအောင် မြင်နေတဲ့ အချိန်ကြီးမှာ ပြိုကွဲခဲ့ရတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းကို လူရွှင်တော် ဝိုင်းချစ်က အခုလိုပဲ ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ “ရွှေညီကို” လူရွှင်တော် အဖွဲ့က အောင်မြင်မှုဒဏ် ကို
အကြာကြီး မခံစားခဲ့ရပါဘူး။ အောင်မြင်ပြီး (၇) နှစ်လောက်ကြာမှ အဖွဲ့ မညီတော့လို့ ကွဲခဲ့ကြတယ်။ အချင်းချင်းက မုန်းတီး၊ ရန် ဖြစ်ပြီး ကွဲခဲ့ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ငွေကြေး ကိစ္စတွေကြောင့် ကွဲခဲ့ကြတာပါ” လို့ ရှင်းပြလာခဲ့တာပါ။
ကျွန်တော်တို့ ၅ ယောက်က ကောင်းလို့နာမည်ကြီး တာမဟုတ်ပါဘူး။ ညီလို့ နာမည်ကြီးတာပါ။အဓိကက ၅ ယောက်လုံးညံ့လို့ အဖွဲ့ပြိုကွဲခဲ့ရပါတယ်။ အောင်မြင်မှု ရရှိနေတဲ့ အချိန်မှ အောင်မြင်တဲ့ ဒဏ်ကို မခံနိုင်တာပေါ့နော်။ ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပဲ
ကွဲခဲ့ကြတာပါ။ “ဒါပေမယ့် အခုထိ ခေါ်တာပြောတာ သူငယ်ချင်းလို ရှိနေကြတုန်းပါပဲ။ တွဲတော့မက ဖြစ်ကြတော့ပါဘူး ကျွန်တော်တို့ ကွဲပြီးတော့ ကောင်းကျော်က ဇာတ်ထောင်လိုက်တယ်။ နောက် ကိုငြိမ်းချမ်းက ဇာတ်ထောင်လိုက်တယ်။
သူတို့က ဇာတ်တွေရှိနေတော့ ၅ ယောက်စုကဖို့က လုံးဝနီးပါး မဖြစ်နိုင်တော့ ဘူးပေါ့။”လို့ တွဲကဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ အကြောင်း ရှင်းပြ လာခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေအများကြီး သိမ်းထားပြီး
ရွှေညီအကိုအဖွဲ့ကို ပြန်လည် စုစည်းစေ လိုကြောင်း၊ ဒါပေမယ့် အ ခုချိန်မှာတော့ မဖြစ်နိုင်သလောက် ဖြစ်သွားပြီလို့လည်း ကိုဝိုင်းချစ်က ဝမ်းနည်းစွာပြောလာခဲ့တာပါ။ သူ့အနေနဲ့ နောက်တက် လာမယ့် လူငယ်တွေကို သူတို့အဖွဲ့လို အောင်မြင်မှု
သက်တမ်းတိုတိုလေးနဲ့ ကွဲသွားတာမျိုးမဖြစ်စေလိုကြောင်းနဲ့ အခုတော့ သာမန်သူများ နောက်လိုက်ဘဝနဲ့ ဖြတ်သန်းနေရ တာကို ကြည့်ပြီး သင်ခန်းစာယူကြပါလို့ ပြောကြားသွားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီး အနေနဲ့လည်း ရွှေညီအကို
အဖွဲ့ကို ပြန်လည် စုစည်းပြီး မြင်လိုကြရဲ့လား?? လူရွှင် တော်ဝိုင်းချစ်ရဲ့ ဖွင့်ဟချက်ကို ဘယ်လိုထင်မြင် တယ်ဆိုတာကို လဲရးသားခဲ့ကြ ပါအုန်းနော်။
(unicode version) အောငျမွငျမူတှေ ရခဲ့ပမေယျ့လဲ ရှညေီအကို အငွိမျ့ဖှဲ့ကွီး ပွိုကှဲခဲ့ရတဲ့ အဓိကအကွောငျးရငျးကို ပွောပွလာတဲ့ လူရှငျတျော ဝိုငျးခဈြ
လူရှငျတျော ငွိမျးခမျြး၊ ဝိုငျးခဈြ၊ ထကျထကျ၊ ရှဲဒိုးနဲ့ ကောငျးကြျောတို့ရဲ့ ရှညေီအကို အငွိမျ့အဖှဲ့ကွီးကတော့ နိုငျငံအနှံ့မှာ အောငျမွငျခဲ့ပမေယျ့ ၇ နှဈတာကာလအပွီးမှာ ပွိုကှဲခဲ့ရပါတယျ။ လူရှငျတျော လောကမှာ အထူးနာမညျ ကွီးခဲ့သလို ယခုထကျထိ
ပရိသတျရဲ့ ခဈြခွငျးကို ရရှိနဆေဲလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုအောငျ မွငျနတေဲ့ အခြိနျကွီးမှာ ပွိုကှဲခဲ့ရတဲ့ အဓိက အကွောငျးရငျးကို လူရှငျတျော ဝိုငျးခဈြက အခုလိုပဲ ပွောပွလာခဲ့ပါတယျ။ “ရှညေီကို” လူရှငျတျော အဖှဲ့က အောငျမွငျမှုဒဏျ ကို
အကွာကွီး မခံစားခဲ့ရပါဘူး။ အောငျမွငျပွီး (၇) နှဈလောကျကွာမှ အဖှဲ့ မညီတော့လို့ ကှဲခဲ့ကွတယျ။ အခငျြးခငျြးက မုနျးတီး၊ ရနျ ဖွဈပွီး ကှဲခဲ့ကွတာ မဟုတျပါဘူး။ ငှကွေေး ကိစ်စတှကွေောငျ့ ကှဲခဲ့ကွတာပါ” လို့ ရှငျးပွလာခဲ့တာပါ။
ကြှနျတျောတို့ ၅ ယောကျက ကောငျးလို့နာမညျကွီး တာမဟုတျပါဘူး။ ညီလို့ နာမညျကွီးတာပါ။အဓိကက ၅ ယောကျလုံးညံ့လို့ အဖှဲ့ပွိုကှဲခဲ့ရပါတယျ။ အောငျမွငျမှု ရရှိနတေဲ့ အခြိနျမှ အောငျမွငျတဲ့ ဒဏျကို မခံနိုငျတာပေါ့နျော။ ငှကွေေးကိစ်စနဲ့ပဲ
ကှဲခဲ့ကွတာပါ။ “ဒါပမေယျ့ အခုထိ ချေါတာပွောတာ သူငယျခငျြးလို ရှိနကွေတုနျးပါပဲ။ တှဲတော့မက ဖွဈကွတော့ပါဘူး ကြှနျတျောတို့ ကှဲပွီးတော့ ကောငျးကြျောက ဇာတျထောငျလိုကျတယျ။ နောကျ ကိုငွိမျးခမျြးက ဇာတျထောငျလိုကျတယျ။
သူတို့က ဇာတျတှရှေိနတေော့ ၅ ယောကျစုကဖို့က လုံးဝနီးပါး မဖွဈနိုငျတော့ ဘူးပေါ့။”လို့ တှဲကဖို့ မဖွဈနိုငျတော့တဲ့ အကွောငျး ရှငျးပွ လာခဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူ့အနနေဲ့ မှတျတမျးမှတျရာတှအေမြားကွီး သိမျးထားပွီး
ရှညေီအကိုအဖှဲ့ကို ပွနျလညျ စုစညျးစေ လိုကွောငျး၊ ဒါပမေယျ့ အ ခုခြိနျမှာတော့ မဖွဈနိုငျသလောကျ ဖွဈသှားပွီလို့လညျး ကိုဝိုငျးခဈြက ဝမျးနညျးစှာပွောလာခဲ့တာပါ။ သူ့အနနေဲ့ နောကျတကျ လာမယျ့ လူငယျတှကေို သူတို့အဖှဲ့လို အောငျမွငျမှု
သကျတမျးတိုတိုလေးနဲ့ ကှဲသှားတာမြိုးမဖွဈစလေိုကွောငျးနဲ့ အခုတော့ သာမနျသူမြား နောကျလိုကျဘဝနဲ့ ဖွတျသနျးနရေ တာကို ကွညျ့ပွီး သငျခနျးစာယူကွပါလို့ ပွောကွားသှားခဲ့ တာဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီး အနနေဲ့လညျး ရှညေီအကို
အဖှဲ့ကို ပွနျလညျ စုစညျးပွီး မွငျလိုကွရဲ့လား?? လူရှငျ တျောဝိုငျးခဈြရဲ့ ဖှငျ့ဟခကျြကို ဘယျလိုထငျမွငျ တယျဆိုတာကို လဲရးသားခဲ့ကွ ပါအုနျးနျော